Latest bazalwane Winklevoss' patent crypto iquka ukhuseleko transaction digital - Blockchain News
Latest bazalwane Winklevoss’ patent crypto iquka ukhuseleko transaction digital
A inkampani ephethwe yi Cameron ne Tyler Winklevoss, wabaseki Gemini cryptocurrency exchange, unikwe igunya lokwenza inkqubo efuna ukuphucula ukhuseleko iintengiselwano digital.
Isicelo kwafakwa ngoNovemba unikwe ngoLwesibini yi U.S. Patent sophawu Office (USPTO). Lichaza a “inkqubo, indlela, kunye nemveliso inkqubo nokuhlawulwa imicimbi ekhuselekileyo ngaphakathi kwinkqubo cloud computing,” Andrew Laucius, CEM Paya and Eric Winer ogama nje abasunguli (kwanayo Winklevosses ifakiwe kwi kuluhlu).
Le nkqubo isebenzisa indibanisela iindlela eziqhelekileyo lokufihla, kuquka imisebenzi hashe kunye umsayino wedijithali. Amanani aqukiweyo isicelo achaze ukuba le nkqubo yenzelwe ukubonelela ukhuseleko kwi lonaniselwano asethi yedijithali ilifu-based.
Post Previous:Ngoku Samsung ngokwenza chips .GOKO ukuba imigodi cryptocurrency
Post Next:Baidu uqala platform kwemfuyo photo blockchain-based
250 iinkampani kunye neqonga blockchain ICICI yebhanki
ukutshintshiselana crypto Korean kuqala ulawulo imizamo self